Jamhuuriyadda Jabuuti oo maanta 43-sano jirsatay.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta u dabbaal-dageysa 43-sano guurada kasoo wareegtay kolkii ay xornimo ka qaadatay Gumeystihii Faransiiska oo muddo isticmaarsanayay dadka dalkaas.
Sanad waliba Jabuuti 27-ka June waxa ay maamuustaa maalintaan, waxaana munaasabado kala duwan oo lagu muujinayo xornimada Jamhuuriyaddaan ay ku qabataa Gudaha dalkaas iyo Bartamaha Soomaaliya oo ay Ciidamo kaga sugan yihiin.
Fariin uu maalintaan kaga hadlayo Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu shacabka kula dardaarmay in ay ku dadaadaan ilaalinta madax banaanida oo loosoo maray halgan dheer.
Hogamiye Geelle ayaa shacabka u rajeeyay in uu alle ka badbaadiyo cudurka Covid-19 oo kiisas kamid ah Jamhuuriyadda Jabuuti horay looga helay, isaga oo tilmaamay in sanadkaan uu kaga duwan yahay sanadihii hore.
Geelle waxa uu guddoomay hambalyo ku saabsan 27-ka June oo ku beegan markii xornimada ay heshay jamhuuriyadda Jabuuti 1977-dii oo maanta laga laga joogo 43-sano, dhambaalada waxa ay kaga kala yimaadeen dalal ay kamid tahay Soomaaliya.
Jabuuti ciidamo ka socda oo xiran Koofida Cagaaran ee Nabad ilaalinta Midowga Afrika AMISOM ayaa ka joogo Soomaaliya, munaasabad lagu muujinayo madax banaanidooda ayay sanad waliba ku qabtaan Gobolka Hiiraan.